Cabaan Lamaan Fayyaa Tokko Tahuu hin Danda’u! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooCabaan Lamaan Fayyaa Tokko Tahuu hin Danda’u!
Damee Boruu tin: Muddee 2, 2018
Yaroo hooggantoonni KFC Dr. Mararaa, Obbo Bakalee fi gareen isaan wajjinturan mana hidhaa keesaa hiikaman, Uummatni Oromoo kumaata dhibaan bahee isaan simachaa fi gammachuu isaa akka ibsachaa ture hundi keenya kan argaa turre. Fulbaana 15, 2018 guyyaa ABO Hayya Duree Dawud Ibsaan hooggannamu Finfinnee seene Uummatni Oromoo milliyoona hedduun lakkawwamu fardaa fi lafaan bahee simaanaa seenaa qabeessa taasiseef jira.
Ijaarsonni Oromoo walitti dhufanii waliin dhaabbachuun yaada eebisamaa dha. Garuu maqaa tokko tahuun yakkamtonni hojii yakka Uummata Oromoo irratti dalaguuf kan godhan garummaa isaa caalaa badii isaatu madaala. OPDOn amma maqaa jijjiratee ODP ofiin haa jettu malee meeshaa diinaa taate waggaa 27 Uummata Oromoo irratti yakka rawwataa turte uummatni irraanfachuu hin danda’u. Maqaa jijjiruun hammenya dalagamee fi cubbuu hojjetame qulqulleessuu hin danda’u. Har’a miseensonni OPDO illee maqaa jijjiratanii bakka dur turanii bakka biraa deemanii muudamuun faashina tahaa jira.
Amma yoom itti uummata kana gowwomsuuf akka yaalamu naaf hin galu. Uummatni Oromoo dammaqee, qindaa’ee ijaaramee haala abdii guddaa namaa kennuu danda’u irra akka jiruu waanan hubadheef lapheen koo gammachuu qaba. Obsi Uummatni Oromoo qabu kun garuu eessaan akka isa gahuuf deemu beekun salphaa miti. Yaroo dheeraa keessa OPDOn shira xaxxaa jirtu Kanaan daandi bilisummaa irraa maqsuun ni mala yaadoo jedhu nan qaba. Karaa biraa gaafa obsa isaa fixe tokko OPDOs akkuma Wayyaanee na gahe jedhee of irraa darbuufis humna gahaa akka qabu naa gala.
Akka ijaarsatti an OPDO irraas tahe kan biraa irra rakkina mataa koo hin qabu. Hunduu amma beekumsaa fi dandeettii isaanii uummataaf yoo qabsawwan eebisamuu qabu. Garuu yakka rawwatamaa jiru utuu agarruu bira darbuun immoo cubbuu caalu taha. OPD fi ODF maal irratti wal tahu danda’u? Nageenyaa fi bilisummaa Uummata Oromoo irratti akka hin taane ifa jira. Cabaan lamaan fayyaa tokko tahuu hin danda’u! Maaliif jedhaa?
Obbo Leencoo Lataa akka OPDO nama qabsoo Uummata Oromoo irratti umurii Wayyaanee guutuu yakka guddaa hojjechaa ture. WBO kuma digdamaa ol campii itti naqee akka ficisiise namni hunduu beeka. Amma gaafa du’uutii akka Malasaa wajjin hojjechaa ture isatu afaan isaan himata. Ega inni du’ees deddeebi’ee biyyaa seenee Wayyaanee wajjin hojjechuuf kadhachaa ture. Wayyaanetu gatii hin qabdu jedhee of irraa darbaa ture. ABO mataa irraa gad diigaa akka quucaru kan gochaa ture. Akeeka ABO guufachiisu kan inni keessaa fi alaan hin goone hin jiru. Hojiin isaa inni guddaan dandeetti itti qabu diigumsa. Wal tahuu Obbo Leencoo utuu dhageenyee hin fixxiin oduun diigee bahuu isaa dhufa. Dhiinya kana ijaarsa Ginbot 7 jedhamu kan Dr. Birhanuu Nagaa hooggannamu waajjin wal taheture. Ginbot 7 kun Uummatni Oromoo hiree miga isaa murteefachuu miti afaan isaan dimma bahuu iyyuu hin feene dha. Duruu achi utaatelee immoo OPDO keessa xiliqsoo seene. Warra akka OPDOn diigamtu fedhuuf ayyaana bareedaa dha.
OPDOn utuu hawwii fi fedhii Uummata Oromoof hojjechuu qabatee ofii dagatee illee taatu ijaarsota Uummatni Ormoo itti gagbaa jiru warra akka ABO fi KFC wajjin walitti dabalamuun uumata biratti kabajaa fi amantii horaaf ture. Warri har’a OPDOn wajjin sirbaa jirtuu fi warri korojoo gudufatee uluuqee biyya seenee aangoo warri badhaasamee jiru , Koloneer Ababaa Garasuu, B. j. Hailu Gonfa, B. J. Kamaal Galchuu fi Obbo Leencoon kan waliin qaban jibinsa ABO fi Akeeka ABO dhabamsiisu qofa. Obbo Lamaanis wagga 27 jibinsa ABO kana waan horachaa tureef warra kana wajjin dhaabbachuuf waan filate fakkaata.
Uummatni Oromoo Mootummaa kan jedhamu hin qabu. Mootummaa jechuun kan nageenya uummataa eeguu fi biyyaa tiksu dha. Uummatni Oromoo utuu Mootummaa OPDO irraa gargaarsa eegatuu dhumaa jira. Salphinaa fi gadadoo hiriyyaa hin qabne itti roorisaa jira. Waan qabu qabatee diina ofi irraa ittisuuf dirqama qaba. Utuu manni maree caffee Oromoo, Uummata Oromoof Uummata Oromoon filamee jiraate guyyaa tokko itti Mootummaa OPDO akka fedhii isaan aangoo gadhiisu gochuuf dirqama qaba. Garuu warri kun miseesota OPDOtu maqaa uummata Oromoon Mana Marree uummataa keessa taa’ee dhiigaa fi foon ilmaan Oromoon coocoo nyaachaa jiran mana marre uummata qabna jechuun waan baayyee nama qaanessu. Utuu achii hin bahiin boqqonnaaf utuu gara Qilinxoo deemanii bareedaa dha.
Warra ABO fi WBO jilbeefachiifna jedhee yaadu lolli isaan gochaa jiran ifaa fi ifatti Uummata Oromoo bal’aa wajjin akka tahe hubachuu qabu. Uummata keenya irratti honkora uumuu danda’u. Balaa fi dhumaatii uummat keenya irraa gahaa jiru akkuma ammaan kana gochaa jiran calsaanii ilaaluun ni mala. Garuu Uuummata Oromoo humni injifachuu danda’u tokko iyyuu akka hin jirre jala sararee isaan yaadachiisu fedha. Gaga’ama isa irra gahaa jiru kanaa mootummaa hin jirre na gargaari jedhee kadhachuu dhiise humna isa tuteese diina of irraa ittisuu qaba.
Kabajaa fi ulfinni isiniif haata’u Saba kiyya Oromoo akkam jiru. Yaa ilmaan aayyaa gaarummaan kee yeroo hunda akka dhukuba sitti dhalaa dhufe nan hubadha argaas jirra. Garuu kan hooda natti ta’e aangoof jedhanii dhiiga ofii,haadha,abbaa,obboleessa, obboleettii fi ilmoo ofii dabarsanii aangoo ykn barcuma bitatu jedhee namni Oromoo yaadee hin beeku ani illeen takkaa hin yaadne.Garuu akka akkas ta’aa jiru kunoo ija guutuun argaa jirra.
Innis: Abiyyii, Lammaa Magarsaa fi fakkaattonni isaanii yoom iyyuu taanaan ittigaafatama yakka kana jalaa bahuu hin danda’ani.Adunyuma kamiyyuu keessatti muummichi ministeeraas ta’e prezadaantiin biyyan bulcha jedhee caasaa bulchiinsaa biyya tokko keessatti diriirfatee jiru tokko irraa hanga gadiitti caasaa waraana biyyoolessaa caasaa tikaa, caasaa bulchiinsaa fi kkf kan bobbaasee galchu isa ta’ee otoo jiruu, yennaa nageenyi Sabootaa diigamu waggoota murtaayeef waliin isaa wallaalamee namni madda waan kanaa wallaalee rakkachaa ture.Garuu amma keessattuu ilmaan Oromoo duguugsisuu keessatti tooftaafi haala akkasiin yakka haahafuu hin qabne kana humna ajajaa jiranitti dhimma bahanii Saba isaanii ficisiisu jedhee namni gaaf tokko illee shekkee beeku hin jire ture.Uummata Oromoo haaficisiisani maaliif jennaa sagantaa gooftaa isaanii Mallas zeenaawwiin saganteeffamee ture waanta’eef.Garuu kan nama ajaa’ibsiisu hidhattoota ufumaa leenjisanii faxinoo,kora bittineessaa ,fi poolisa Oromiyaa jedhanii bobbaasan boodaan waraana ittisa biyyaa itti bobbaasanii ficisiisuun hojiin tarsiimoo akkasii maniin isaa ykn galmi isaa maali jettanii yaaddu?Akka kiyyatti jarittiin kun foon namaa akka waan nyaachaa jirtuutti natti mul’ata.Kun karaa kibba Oromiyaa:Booranaa,Gujii fi Baaleen Sabakeenya ficisiisuun, gama bahaan uummata keenya baha Oromiyaa rasaasa illee tuffataniifi yennaa manaa fi beeyileedaa waliin waadan, dhihaan maqaaf yennaa Beenishaangul ofdura oofanii boodaan meeshaa gur-guddaan golgaa gochuun lafa irraa haxaahanii reefka isaa immoo ciranii dadhabanii ibiddaan waadan fi yennaa Kaaba Oromiyaatiin uummatni keenya Walloo yennaa rasaasaan ajjeesanii dadhabanii mana waliin ibiddaan guban lammaanis ta’e Abiyyi xinnoo isheellee isaan hin rifaasisne maaliif jennaan ajaja isaan kennantu raawwachaa jira waan ta’eefi. Kanaaf yaa Saba Oromoo haraamuun haraamuma haadhaa fi abbaa isheefuu rifaatuu hin qabdu kan ishee halkanii fi guyyaa hojechaa jirtu barcuma isheef waan ta’eef ilmaan kiyyatu aangoo irra jira jettanii callistanii hin taa’iinaa.Abiyyis ta’e Lammaan diinota innikkaa keessan malee bulchitoota keessan akka hin taane hubattanii wal qabattanii kan qabdaniin uleedhaa hanga qawweetti dhimma bahuun warra Bilisummaa keessaniif falman cinaa hiriirtanii akka qabsoo Bilisummaa keessan finiinsitan.